सहि र सत्य, तथ्य समाचार प्रवाहकोलागी धन्यवाद् ।
यौटा गुट, जसको अस्तित्व नै हत्या, हिंसा र झुटको सहारामा टिकेको छ, त्यसका नेताबाट साँचो कुराको आश गर्नु हाम्रै गल्ति हो ।
पत्रकार विरेन्द्र साहको हत्याको तथ्य पनि यस्तै गरि लुकाउने प्रयास नभएको होईन। अपराधिलाई दण्ड होईन संरक्षण दिन मात्रै माओवादीहरु सधैं अगाडि रहेको कुरा कसेमा छिपेको छैन ।
एउटा गुमनाम सत्य ल्याउनु भएकोमा अन्जान जीलाइ तथा रमेसजीलाइ धेरै धेरै धन्यबाद।
यस्तै छ याहां, मर्ने मरिराख्छन,मार्नेहरु सानसंग राज गरिरहन्छन।
आशा गरौं न्याय कानुनको उपयोग नेपालमा छिटै होस।
ठरकी सर, यो दौंतरीमा बिचमा रेखा कताबाट आयो? लौन केही गर्नु पर्यो। केही उपाय छ कि?
क्यामेरा नै साक्षी चाहिने भए अर्कै कुरा हो नत्र यसरी खुला भइसकेको समाचारलाई होइन भनेर ढाट्दैमा चोखिएं भनेर दंग पर्नु र संधै दुनियालाई गुमराहमा पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रम माओबादीले पाल्नु लाई नया नेपाल हैन "मध्य युगिन नेपाल" तर्फको यात्रा भन्दा हुन्छ ।
क्यामेरा नै साक्षी चाहिने ? ठिक कुरा गर्नु भो पान्डा जी। यस्तै हो भने त मान्छे तानेर ल्याएर पुलिसको अगाडी राखे पनि नसमात्न सक्छन।